राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा कुन सबैभन्दा अब्बल ?
काठमाडौं : नेप्सेमा सूचीकृत ८ राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार केही बैंकको नाफा र वितरणयोग्य नाफा दुवै बढेको छ । अधिकांश सूचकमा मुक्तिनाथ विकास बैंक अब्बल देखिएको छ । कोरोना कहरका बीचमा सार्वजनिक रिपोर्टमा कस्तो छ समग्र वित्तीय अवस्था औसतमा निकाल्न सक्ने विकास बैंकहरुका लागि सफलताका रुपमा पनि हेरिएको छ ।
५ बैंकको चुक्ता पुँजी बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ५ राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको चुक्ता पुँजी बढेको छ । ३ बैंकको पुँजी भने गत वर्षकै यथावत रहेको छ । सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी बढाउनेमा मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको छ ।
यसअवधिमा यो बैंकको चुक्ता पुँजी ४१.११% ले बढेर ४ अर्ब ३२ करोड ४९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो नै सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी भएको विकास बैंक हो ।
कुन बैंकको जगेडा कोषमा कति रकम ?
१ वर्षको अवधिमा ७ बैंकको जगेडा कोष बढेको छ । जगेडा कोष घट्नेमा कामना सेवा विकास बैंक रहेको छ । यसको जगेडा कोष ४.३५% ले घटेर ५० करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष बढाउनेमा भने ज्योति विकास बैंक परेको छ ।
यसको जगेडा कोष १८१.५१% ले बढेर ८९ करोड ४६ लाख १६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यता, रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष महालक्ष्मी विकास बैंकको १ अर्ब ६८ करोड १७ लाख ७ हजार रुपैयाँ छ ।
सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा मुक्तिनाथ विकास बैंक
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको छ । यसअवधिमा यसको नाफा २८.५८% ले बढेर २९ करोड ४१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसअवधिमा ४ बैंकको नाफा बढेको छ भने ४ को नाफा घटेको छ । सबैभन्दा धेरै नाफा बढाउनेमा कामना सेवा विकास बैंक रहेको छ । यस बैंकको नाफा ९७२.९५% ले बढेर २० करोड १ लाख १६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
३ बैंकको वितरणयोग्य नाफा बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ३ बैंकको वितरणयोग्य नाफा बढेको छ । सबैभन्दा धेरै वितरणयोग्य नाफा बढाउनेमा कामना सेवा विकास बैंक रहेको छ । यसले गत वर्ष ९८ लाख ७ हजार ऋणात्मक रहेको यो शीर्षकलाई वृद्धि गरी अहिले ७ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा पुर्याएको छ । त्यसपछि, ज्योति विकास बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४१.९५% ले बढेर ४ करोड ३५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
सबैभन्दा धेरै वितरण योग्य नाफा मुक्तिनाथ विकास बैंकको १५ करोड २१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसअवधिमा गरिमा विकास बैंकको वितरण योग्य नाफा ९३.०१% ले घटेर ४२ लाख १९ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । महालक्ष्मी र शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकको वितरणयोग्य नाफा शीर्षक भने ऋणात्मक छ ।
प्रतिसेयर आम्दानीमा कामना सेवा अघि
असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै कामना सेवा विकास बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी देखिएको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी २८ रुपैयाँ ५१ पैसाले बढेर ३१ रुपैयाँ ५१ पैसा पुगेको छ ।
यस बैंकको खुद नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको हो । त्यस्तै, महालक्ष्मी विकास बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढेको छ भने अन्य बैंकको घटेको छ ।